Isitudiyo sokuZijonga kufutshane nesikhululo seenqwelomoya i-ATL!
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguMel
Wamkelekile kwindawo yakho yokuhlala yabahambi. Phumla kwaye uphumle emva kwenqwelomoya ende okanye uqhube kwindawo yabucala yeBrand New kwindawo ekhuselekileyo nenobubele. Zijonge ngokungena kwethu ngasese kunye ne-smart lock. Sibekwe ngokulula malunga nemizuzu eli-15 ukusuka e-Atlanta Harts-field Airport. Le suite inendawo yokungena yabucala enendawo yokupaka ephangaleleyo kwaye ixhotyiswe ngazo zonke iimfuno eziyimfuneko ukuze kube lula kuwe. Wamkelekile kwikhaya lakho kude nekhaya!
Iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise igumbi labucala elinendlu yangasese eyahlukileyo, iwasha kunye nesomisi, kunye nefriji enkulu kunye ne-microwave kwindawo yokungena ekhitshini.
Sikulungele imizuzu emi-5 ukusuka kuhola wendlela we-I-85 kwaye sibekwe imizuzu emi-3 kude nePolisa laseMorrow kunye neSebe loMlilo. Zininzi iindawo zokutyela kunye neevenkile ezithengisa ukutya ngaphakathi kumgama oziikhilomitha ezi-1 ukuya kwezi-2.
Iqela lethu labaLawuli liyamema kakhulu kwaye lisabela kakhulu kwimiyalezo yencoko kwi-AIRBNB app. Ukuba undwendwe luyimfuneko lunokuthi luthumele i-imeyile, lubhale, okanye lusebenzise i-Ring doorbell ukunxibelelana namalungu ahlukeneyo eqela.
Iqela lethu labaLawuli liyamema kakhulu kwaye lisabela kakhulu kwimiyalezo yencoko kwi-AIRBNB app. Ukuba undwendwe luyimfuneko lunokuthi luthumele i-imeyile, lubhale, okanye lusebe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Morrow